InviZible Pro: အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက် Android အက်ပလီကေးရှင်း Linux မှ
InviZible Pro: အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက် Android အက်ပလီကေးရှင်း
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အန်းဒရွိုက်, applications များ
အကြောင်းက၊ ငါတို့ကမကြာခဏတင်လေ့မရှိဘူး အခမဲ့သို့မဟုတ်ဖွင့်ထားသော application များ အတွက် Android operating systemယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အလွန်အသုံး ၀ င်သည်ဟုယုံကြည်သောတစ်ခုကိုပြောပြပါမည် "InviZible Pro".
"InviZible Pro" ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသောရိုးရှင်းသောအခမဲ့အခမဲ့ open source application တစ်ခုဖြစ်သည် အွန်လိုင်း privacyကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာများကိုအန္တရာယ်ရှိသောဆိုက်များမှကာကွယ်ပေးသည် ကြည့်ရှုသည့်အခါခြေရာခံခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ သူတို့အတွက်။ အနည်းငယ်ပိုသောအရာ။
၏ခေါင်းစဉ်သို့အပြည့်အဝရတဲ့မီ "InviZible Pro"အချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ နှင့် Android နှင့် GNU / Linuxမရ။ ဤအရာအတွက်ဤတင်ပြချက်ကိုဖတ်ပြီးသည်နှင့်သင်ချက်ချင်းအောက်ရှိအောက်ပါ link များကိုနှိပ်ပါ။
"GAFAM အဖွဲ့၏နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သော“ Google” သည်သူ့ကိုယ်သူနှင့်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအားမူဝါဒများ၊ လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအားနည်းချက်များတွင်မကောင်းသောအတွေ့အကြုံများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလေ့ရှိသည်။ စိုးရိမ်သည်။ ပြီးခဲ့သောအရာများအားလုံး၏အကျိုးအတွက် "Android" သို့မဟုတ် "Linux" ကိုယ်တိုင် (သို့) အခြားသူများကို အခြေခံ၍ အချိန်နှင့်အမျှပေါ်လာသည်။" Google နှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲ Android: အခမဲ့ Android! ငါတို့မှာဘာရွေးချယ်စရာတွေရှိသလဲ။
1 InviZible Pro: ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက် open source app
1.1 InviZible Pro ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 ဒီ app ကိုသုံးဖို့ဘာကြောင့်အကြံပြုတာလဲ။
InviZible Pro: ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက် open source app
InviZible Pro ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် de "InviZible Pro"၎င်းကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
"အွန်လိုင်း privacy နှင့်လုံခြုံရေးအတွက် Android application တစ်ခု ၎င်းသည် privacy ကိုထိန်းသိမ်းသည်၊ အန္တရာယ်ရှိသောဆိုက်များမှကိရိယာများကိုအကာအကွယ်ပေးသည်၊ ခြေရာခံခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးပိတ်ဆို့ထားသောအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကို ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်လူသိများသော modules များပါ ၀ င်သည် DNSCrypt, TR y ခရမ်းရောင် I2P၎င်းသည်လည်း open source ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးသောလုံခြုံရေး၊ လုံခြုံမှုနှင့်အင်တာနက်ကိုအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အသုံးပြုသော"
နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ developer များ ၎င်းကိုချဲ့ထွင်ပါ၊
"DNSCrypt, Tor နှင့် Purple I2P modules အားလုံးကိုတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ခု၊ တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြား ခွဲ၍ သုံးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်ကိုသက်တောင့်သက်သာနှင့်လုံခြုံသောအသုံးပြုမှုကိုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုခွင့်ပြုနိုင်သောအလားအလာကောင်းများကိုပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည်။"
ယင်း၏အတွက် Android Store ရှိတရားဝင်ကဏ္ section၎င်း၏အကျယ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ အင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
၎င်းသည် root access မလိုအပ်ပါ။
အသုံးပြုသူ၏တည်နေရာနှင့် IP ကိုဝှက်ထားသည်။
ARP spoofing ထောက်လှမ်းမှုကိုကူညီပေးသည်။
သူ့မှာပေါင်းစပ် firewall တစ်ခုရှိတယ်။
၎င်းသည် open source ဖြစ်သည်။
Material Design အပြင်အဆင်ပါ ၀ င်သည်။
ဒီ app ကိုသုံးဖို့ဘာကြောင့်အကြံပြုတာလဲ။
ယင်း၏အတွက် GitHub တွင်တရားဝင်ဆိုဒ်၎င်း၏ developer များကရှင်းပြသည် "InviZible Pro" ၎င်းသည်အခြားအလားတူ application များထက်ပိုကောင်းသည်။
၎င်းသည် Android တွင် DNSCrypt ကိုလက်တွေ့အသုံးပြုရန်ထောက်ပံ့ပေးသောတစ်ခုတည်းသော application ဖြစ်သည်။
Tor ကွန်ယက်ကိုသုံးသော Orbot application ထက်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုတည်ငြိမ်သည်။
၎င်းသည်တရားဝင်ခရမ်းရောင် I2P ၀ ယ်သူထက်များစွာလက်တွေ့ကျသည်။
၎င်းသည်မင်းအား Tor မှတဆင့်မည်သည့်ဝဘ်ဆိုက်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများကိုလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာစီစဉ်သတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည်မိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခု (သို့) Android TV set-top box ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသော WiFi access point တစ်ခုအဖြစ်မည်သည့်ဖုန်းမှမသုံးဘဲ root access မရှိဘဲအလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၎င်းတွင် decoders များအတွက် optimized interface တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
၎င်းသည် privacy နှင့်အမည်ဝှက်ရန်အမျိုးမျိုးသော VPN များနှင့်အခြားကိရိယာများကိုအစားထိုးသည်။
၎င်းသည် DNSCrypt, Tor နှင့် Purple I2P တို့၏အင်္ဂါရပ်များကိုအောင်မြင်စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။
တိုတိုပြောရရင်၊ "InviZible Pro" စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် open source app နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ထိန်းသိမ်းခွင့်ပြုသောအခမဲ့ဖြစ်သည် အွန်လိုင်း privacyကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာများကိုအန္တရာယ်ရှိသောဆိုက်များမှကာကွယ်ပေးသည် ကြည့်ရှုသည့်အခါခြေရာခံခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ သူတို့အတွက်။ ထို့ပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည် အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုရယူနိုင်ခြင်း ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပထဝီဝင်အချက်အချို့ကနေငါတို့ကိုငါတို့တွေ့နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိကောင်းမွန်သော app တစ်ခုဖြစ်သည် စမ်းသပ်ပြီးအကြံပြုသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အန်းဒရွိုက် » InviZible Pro: အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက် Android အက်ပလီကေးရှင်း
KDEApps4: အင်တာနက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် KDE ကွန်မြူနတီလျှောက်လွှာများ